tolis.co Ukufundwa kwezinkanyezi Izibikezelo May 2022 Ngoba Konke Izimpawu ze-Zodiac
Ukufundwa kwezinkanyezi May 2022
Ukufundwa kwezinkanyezi Isazi sezinkanyezi Ihlaziya @ Ukubhula Imibhalo
Uzobonakala ngenhlalakahle nethemba namuhla. Uzothanda wonke umuntu futhi uzofuna ukuzijabulisa. Futhi wusuku olufanele ukubhekana nomhlobiso wekhaya lakho. I-
Love: Lolu suku luzokwenza ukholelwe ukuthi ngisho nobudlelwano obungenankinga nobunenkinga bungagudla ngokuzwana kwesinye isikhathi. Uzojabula kakhulu futhi ube nesimo esihle namuhla futhi uzoba nesidingo sokuzijabulisa futhi ngasikhathi sinye ubonise sonke isisa sakho. I-
Professional: Kungcono ukugwema ihhovisi namuhla ngaphandle kokuthi unezinto ezinhle eziseduze! Konke okunye kuthatha ithuba elingathandeki, eliqiniswa ukuba khona kwakho futhi okuvumela ukungabikho kwakho ukukhohlakale. ... Okuningi
Kukhona kungenzeka ukuthi uzwe ukucindezeleka okuthile, ukungakhululeki nokuphelelwa ithemba. ... Okuningi
Kunenkinga, engahle ibe yingqondo. Uyacasuka kakhulu futhi awuhlalisani kahle nabanye.
Uthando: Kungahle kube nobunzima ebudlelwaneni nabobulili obuhlukile noma ukukhangana okuncane kocansi, okungeke kuholele kunoma yini enkulu. ... Okuningi
Ukuzwela kuza phezulu, hhayi ngenxa yesici esithile sangaphandle. Ufuna ukusondelana nokuvikeleka endaweni yakho eseduzane noma yomndeni.
Uthando: Uzizwa usindwa yimizwa futhi abesifazane bangadlala indima ebaluleke kakhulu empilweni yakho, ngoba empeleni bazokusiza ukwazi ukuveza imizwa yakho. ... Okuningi
Ukuzethemba nokuguquguquka kukwenza ube mnandi kwabanye. Manje usungathatha izinyathelo, ezizobonakala zilungile impela.
Uthando: Namuhla uzoba muhle kakhulu. Ungahle unqobe futhi udlale ngothando noma udlale ngothando. Kubalulekile ukuthi ekugcineni ungadlala i-foreplay ngokunethezeka. I-eroticism yakho ikhuthaza abanye. I-
Professional: Lesi yisikhathi lapho uzwa khona ukuthi awukwazi ukusebenza ngempumelelo ngokwakho njengabanye futhi lokhu kungenxa yokuthi udinga isilinganiso esithile sokuzimela. Ukuzethemba kwakho kuzokwenza abanye bafune ukusebenza nawe. Uma kunjalo, unganqikazi ukuthatha isinyathelo kuqala. ... Okuningi
Izinzwa zizoba yisikhathi senkinga yokugqashuka nothile noma nothile. Kukhona ithuba lokuthi uzolwa nomama wakho, untula ukuzinza nokuzimisela futhi ngalokho akufanele uqale izinto ezintsha, noma wenze ama-aphoyintimenti abalulekile, lapho kufanele uhleleke khona, ngoba mhlawumbe ngeke ube khona. I-
Professional: Lolu akulona usuku olufanele lokubandakanya izingxoxo ezidinga ukusebenzisa ingqondo. Izwe lakho elingokomzwelo, kodwa futhi linengqondo, lisenkingeni enkulu. ... Okuningi
Ukuphana nothando kuyanda namuhla. Wamukela ukuqonda nothando lwemvelo yakho, ngenkathi wena, ujwayele ukusiza umhlaba wonke ngokusebenza nangokwengqondo.
Uchwepheshe: Uyabakhathalela abanye futhi nabo bayazizwa. Isikhathi esihle sokusebenza nabanye futhi ikakhulukazi namalungu omndeni wakho futhi ubaqinisekise ukuthi banamathele ezinhlelweni zabo. Ukuthi bayaphumelela ungaqiniseka ukuthi kuzoba nomthelela omuhle nakuwe. ... Okuningi
Usuku oluhle kakhulu lobungqabavu. Kukunika impilo enhle futhi kukunikeze inhlalakahle, ngenkathi ngokwengqondo uzizwa unamandla futhi ungabunqoba noma ibuphi ubunzima ongahle ube nabo. Lolu suku lulungele imicimbi edinga ukuya esixukwini. Ukuthandwa kwakho kukhula kakhulu namuhla. Uthando
Uzizwa uzwana futhi unokuthula nawe futhi lokhu kuthuthukisa bonke ubudlelwano bakho, ikakhulukazi obusondelene kakhulu. Manje usungakhombisa ngqo ukuthi ufunani ebudlelwaneni bakho, yiziphi izinto ezikumbozayo nokuthi yini engafuni. I-
Professional: Uzwa kahle futhi lokhu kubonakala emsebenzini wakho. Isikhathi esihle soxhumana nabo. Isimo esihle ngaso sonke isikhathi sithanda izingxoxo futhi sizenze ziphumelele. ... Okuningi
Intshisekelo yakho igxile ekhaya nasemndenini womndeni. Umama wakho uyakuxhasa futhi akuqinisekise. ... Okuningi
Ukuvumelana kwengqondo okuboniswa namuhla, kukwenza ube mnandi kakhulu futhi kukhipha umuzwa wokulondeka kulabo abaseduze kwakho. Bakubona njengovuma izono futhi uzimisele kakhulu ukubalalela futhi ugqugquzeleke kakhulu ukubanikeza izeluleko ezifanele. ... Okuningi
Izenzo zakho zibonakaliswa ihaba elithile. Kukhona ukukhathazeka ngezingxoxo zentshisekelo yefilosofi kanye nokuthambekela kokwethula isithombe se-xerola. ... Okuningi
Izibikezelo Zansuku zonke - Ukuhamba, Imephu, Ubuso, Amaplanethi, Izindlu, Izimpawu ze-Zodiac futhi Okuningi
Usuku lokuzalwa lomuntu Mahhala
Imephu, Ubuso, Amaplanethi, Izindlu, Izimpawu ze-Zodiac futhi Okuningi